Ny Wine Launcher 1.5.3 dia miaraka amin'ny fanohanan'ny Gamepads, fanatsarana ary bebe kokoa | Ubunlog
Miakatra miaraka amin'ny fanohanan'ny Gamepads, fanatsarana ary maro hafa ny divay mpamokatra divay 1.5.3
vao haingana ny famoahana ny kinova vaovao an'ny Wine Launcher 1.5.3 dia nambara, izay rindranasa efa noresahintsika teto tamin'ny bilaogy ary nanomboka teo dia natomboka ny kinova isan-karazany ary amin'ity tranga vaovao hiverenanay hanaraka ny fampiharana ity dia hitantsika fa efa ao amin'ity kinova 1.5.3 vaovao ity .
Ary tamin'ity famoahana vaovao ity, lafiny maro izay efa noresahintsika tamin'io fotoana io no nohatsaraina ary ohatra ny fanovana vaovao hitantsika dia ny fampiharana an-keriny ny fivoahan'ny divay, ary koa ny fanatsarana ny ny mpamily Mesa, OpenGL, mpanohana gamepad, ary maro hafa.
Ho an'ireo izay tsy zatra ny Mpanamboatra divay dia tokony ho fantatr'izy ireo izay, araka ny anarany, dia mpandefa divay izay mifantoka amin'ny lalao video. Ny Wine Launcher dia tetikasa iray izay raha nanandrana ny PlayOnLinux, Lutris ary / na ny Crossover ianao dia hahatsapa avy hatrany fa miaraka amina rindranasa iray izay maka zavatra amin'ny tsirairay avy ianao.
Ity tetikasa ity Izy io dia miavaka amin'ny famolavolana ho fitoeran-javatra ho an'ny lalao Windows mifototra amin'ny Divay.
Anisan'ny mampiavaka ny tetikasa miavaka ny fomba maoderina an'ny mpisantatra, ny fitokanana sy fahaleovan-tena amin'ny rafitra, ankoatra izany omeo misaraka tsirairay ny divay sy Tovona, izay miantoka fa tsy hianjera ny lalao rehefa manavao ny divay amin'ny rafitra ary hiasa foana izy io.
1 Vaovao lehibe momba ny Launcher divay 1.5.3
2 Ahoana ny fametrahana ny Launcher divay amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Vaovao lehibe momba ny Launcher divay 1.5.3
Amin'ity kinova vaovao amin'ny fampiharana ny fanovana lehibe indrindra misongadina ity dia afaka mahita izany isika Ny famaranana an-tsokosoko divay dia napetraka alohan'ny fivoahan'ny fampiharana. Ny antony fampidirana an'io fivoahana an-tery io dia ny fanitsiana ireo tranga izay nihantona toy ny zombie ny fizotran'ny divay rehefa vita ny lalao.
Fiovana iray hafa efa natao dia izay nanampy fanamafisana TABLE_GL_VERSION_OVERRIDE, izay ahafahana misoroka ny hadisoan'ny mpamily Mesa sasany izay manakana ny fandefasana ny lalao OpenGL, ho fanampin'ny ny pejy diagnostika izao dia mampiseho ny fivoahan'ny kinova OpenGL tohanan'ny adapter video.
Etsy ankilany, koa nanampy ny fanohanana gamepads, miaraka amina fampiharana iray izay mamela anao hilalao lalao izay tsy mifanaraka amin'ny gamepad. Avy amin'ny toetra fampiharana, hmisy ny lamina isan-karazany ho an'ny gamepad tsirairay sy ny fisarahana samihafa ho an'ny lalao tsirairay. Ny HTML5 Gamepads API koa dia nafindra tao amin'ny node-gamepad, izany dia nanala ny filana tsindry bokotra gamepad hanombohana ao anaty WL.
Fanampin-toerana nanampy "Proton TKG: Gardotd426"
Nanampy ny toerana fitahirizana "divay GE"
Fanampin-toerana nanampy "divay nanangana ho an'ny Star Citizen: gort818"
Nanampy ilay toerana fitahirizana "divay manangana Star Citizen: snatella"
MangoHud dia nohavaozina amin'ny kinova 0.6.5.
Nanisy fampidirana Steam Proton ho an'ny Proton 6.3 sy ambony hiasa.
Farany, raha liana hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao azonao atao ny manamarina ny antsipiriany Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Ahoana ny fametrahana ny Launcher divay amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Ity rindranasa ity dia tsy manana fonosana voaangona isaky ny fizarana, fa kosa fonosana tokana no zaraina amin'ny ankapobeny Izay ihany no mila manome alalana famonoana hahafahantsika mandefa azy, izay amin'ny ankamaroan'ny fizarana Linux dia miasa ny fonosana.
Ny fiankinan-doha sisa takiny dia ny fametrahana ny divay. Raha te-hahazo ilay fonosana dia alao fotsiny ilay fonosana vao haingana indrindra (azontsika atao izany avy amin'ny rohy manaraka).
O avy amin'ny terminal amin'ny alàlan'ny fanoratana:
Manome alalana izahay ary mamono amin'ny:
Raha te hanampy lalao dia tsindrio fotsiny ny "add game vaovao" ary hisokatra ity varavarankely manaraka ity izay hametrahanay vaovao momba ny lalao:
famaritana (tsy voatery)
tohan-kevitra amin'ny mpandefa (tsy voatery)
Manampia kisary (habe)
Ary safidy fanampiny
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Games » Miakatra miaraka amin'ny fanohanan'ny Gamepads, fanatsarana ary maro hafa ny divay mpamokatra divay 1.5.3
Clapper, mpilalao haino aman-jery tsotra sy maoderina
Linux 5.14-rc2 no RC lehibe indrindra amin'ny andiany 5.x iray manontolo